Thwebula Steam 2.10.91.91 – Windows – Vessoft
Steam – omunye ethandwa kakhulu umdlalo ezisekelweni ukulanda imidlalo computer futhi ubuyekeze nabo ngokusebenzisa i-internet. Isofthiwe iqukethe inqwaba ye imidlalo izinhlobonhlobo ezihlukene ezingasetshenziswa wathenga ngesisekelo khulula, ngentengo egcwele noma ngentengo encishisiwe emva kwesikhathi esithize. Steam ikuvumela ukuba ukudlala imidlalo online futhi adale zeqembu ukuxhumana ngabadlali. Isofthiwe kusindisa idatha yomsebenzisi on iseva eqhelile eyenza ukusebenzisa izinto uthenge futhi udlale imidlalo iyatholakala kwi computer ezahlukene. Futhi Steam ikuvumela ukuba ufake okuqukethwe okwengeziwe imidlalo.
Umtapo enkulu imidlalo izinhlobonhlobo ezihlukene
Dlala nabangani inthanethi
Ukuxhumana in ingxoxo yeqembu
Izinto uthengelwe imidlalo
Download okuqukethwe okwengeziwe imidlalo